120Hz Display နဲ့ Low-light ပိုကောင်းလာဖွယ်ရှိတဲ့ iPhone 12
2020 အတွက် ဂုဏ်သတင်း မွေးပျံ့နေသူက Apple လို့ ဆိုရမှာပါ။ ဗိုင်းရပ်စ် မွေနေလို့ တကမ္ဘာလုံး အတိုင်းတာနဲ့ ရောင်းအားကျ ၊ ဝင်ငွေ လျော့နည်းမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပေမယ့် မျက်နှာပန်းလှနေတယ် ပြောရဦးမှာပါ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Apple ထုတ်ကုန်တွေဟာ Generation Improve ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာထက် သုံးစွဲသူစကား နားဆင်ပြီး ရွှိုင်းပေးထားတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်တုန်းက ဒေါ်လာ ၃၉၉ တန် iPhone SE (2020) ကြေညာပေးခဲ့သလို ပန်းသီးကိုင်ချင်သူတွေအတွက် စိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့ တန်ဖိုးတစ်ခု ဖြစ်နေခဲ့တယ်။
တချို့တွေက မမိုက်ဘူး ဆိုကြပေမယ့် ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးပါ။ ခေတ်အနေထားအရ အာသာပြေ၊ အပန်းဖြေဖို့လောက်ပဲ Screen အရွယ်စားကြီးပြီး Performer ဖြစ်မှ ကြိုက်ကြတယ်။
Apple အနေနဲ့လည်း COVID-19 ဖြစ်ပွားနေစဥ် ကာလအတွင်းမှာ အသစ်၊ အသစ်သော သတင်းတွေနဲ့ အဆက်မပြတ်ရအောင် တနည်း ကမ္ဘာပေါ်က လူတွေနဲ့ အချိတ်ဆက်မိနေစေဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ မိတ်ဆက်ခဲ့တာပါ
ဒါကလည်း အခွင့်ရေးတစ်ခုနဲ့ ကြုံသွားတယ် ဆိုရပါမယ်၊ တဖက်မှာ Pixel နဲ့ 10 II လို Counterpart တွေ ရှိနေတော့ စျေးကွက်ခင်းဖို့ လိုတယ်လေး။ iPhone 12 နဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း မော်ဒယ် ၄ မျိုး ပါဝင်လာမယ်လို့ တခါ ဖော်ပြဖူးပါတယ်။
Image: Page Tech
ကောလာဟလ သတင်းတွေအရ $649 နဲ့ စတင် ရောင်းချပေးမယ့် iPhone မော်ဒယ်အသစ်ဟာ OLED Panel တမျိုးထဲကိုပဲ သုံးလာမှာဖြစ်သလို Notch အရွယ်အစားကလည်း ပိုသေးသွားမယ်လို့ သိထားရပါတယ်။
5G & LiDAR
ယခု တဖန်ပေါက်ကြားလာတဲ့ သတင်းမှာတော့ Cosmetic Design ပြောင်းလဲသွားမယ့်အပြင် 5G နဲ့ LiDAR စနစ် ပါဝင်မယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဒီတော့ iPhone X တုန်းကလို Revolutionary ထုတ်ကုန် ဖြစ်လာနိုင်မလား?
9to5Mac အဆိုရ Screen အရွယ်စား ပိုကြီးတဲ့ 6.1” နဲ့ 6.7” မော်ဒယ်တွေမှာ 120Hz Display သုံးလာနိုင်ပြီး Galaxy S20 စီးရီးနဲ့ Head-to-head ချသွားမယ့် အနေထားရှိပါတယ်။
Rumour အဆိုရ 90Hz Screen သုံးလာဖို့ Apple အနေနဲ့ အချိန်ကောင်း ၊ ခွင်ကောင်း စောင့်နေတာ ဖြစ်တယ်ဆိုထားတဲ့အတွက် 2020 မှာ တည့်သွားပြီ သုံးသပ်ရမှာပါ။
သို့ပေမယ့် Galaxy S20 လို Entry Level မှာတောင် 120Hz Display ၊ 3,200 x 1,440 Resolution သုံးထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Apple ဘယ်လို Keep Up လုပ်မလဲ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။
နောက်ထူးခြားချက်က ကင်မရာ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်တင်သွားမယ့် လက္ခဏာတစ်ရပ် ဖြစ်ပြီး Low-light Photography ပိုမိုက်လာမယ် အဲ့အတွက် ပိုမြန်ဆန်တဲ့ Autofocus လည်း ပါလာမယ်လို့ သိထားရပါတယ်။
ထို့နည်းတူ Image Stabilization နဲ့ မျိုးဆက်သစ် Smart HDR Feature သုံးထားနိုင်ပြီး Dimly Lit Shots တွေမှာ Noise ထတာ လျှော့ချနိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ဒါထက် LiDAR အသုံးပြုပြီး Autofocus ပိုင်းအပြင် 3x Optic Zoom ၊ Digital Zoom တွေမှာ အဆင့်မြင့်ထားနိုင်တယ်။
Along with Hardware Level Improvements
Resolution မြင့် ပုံရိပ်တွေ ပေးစွမ်းဖို့ Apple အနေနဲ့ 48MP ၊ 64MP Shooter နဲ့ စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်း သိခဲ့ရပေမယ့် ရလာဒ်တွေကို မနှစ်မျို့ဘူး ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် iPhone သစ်မှာလည်း 12MP နဲ့ မြင်ရဖို့ များနေပါတယ်။
Notch ကြီး ပိုသေးလာမယ်ဆိုတဲ့ နောက်ကွယ် အကြောင်းပြချက်တစ်ခုက FaceID ရဲ့ Sensor Array ဟာ အရွယ်စား ပိုသေးလာမယ့်အပြင် Rumours တွေအတိုင်း ပိုကျယ်တဲ့ Wider Angles မှာ အလုပ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါ။
ဒါရဲ့ အားသာချက်က စားပွဲခုံရှေ့ထိုင်နေရင်း စမတ်ဖုန်းကို တင်ထားရုံနဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေတောင် Unlock လုပ်နိုင်မယ်လို့ ပြောချင်တာပါ။ အခုလို နည်းပညာသစ်တွေနဲ့အတူ 6.7” အရွယ် iPhone 12 မှာ 4,400mAh Battery သုံးလာနိုင်ပြီး 5G နဲ့ 120Hz Display အတွက် အားဖြည့်ထားတာလို့ ယူဆမိပါတယ်။
iPhone မော်ဒယ် အသစ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ Leak News တွေက စုံသင့်သလောက် စုံနေပြီဆိုပေမယ့် Apple အနေနဲ့ အံကိုက်ဖြစ်မယ့် ဖုန်းထုတ်လာမလား ဆိုတာကိုပဲ စောင့်ကြည့်ရုံပါ။ ခေတ်အနေထားကလည်း Leak ဆိုရင် 90% လောက် မှန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ခုပြောသွားတဲ့အချက်တွေတိုင်း iPhone 12 ကို မြင်ရနိုင်မလား?
Source: Engadget ၊ 9to5Mac